गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध मतदान गर्न सांसदहरु रिसोर्टमा, को कहाँ ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध मतदान गर्न सांसदहरु रिसोर्टमा, को कहाँ ?
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद गरि ३२ सांसद रहेका छन् ।